Bankiga Hormarinta Islaamka oo boqolaal barakacayaal ah Galkacyo gargaar cunto qaybineed ugu sameeyey – Radio Daljir
Galkacyo,Jan 12 -Boqolaal qooys oo barakacayaal ah oo ku dhaqan magaalada Galkacyo ayaa maanta loo qaybiyey sahay gargaar oo ka timid Bangiga Islaamka taasoo iskugu jirtay noocyada raashinka qutul-daruuriga ah.
Qoysaska tirada badan ee maanta cunnooyinka mucaawimada ah loo qaybiyey ayaa ka mahadceliyey taakulada gargaar ee loo fidiyey iyadoo goobaha cunno qaybintaasi ay ka dhacdayna ay ku sugnaayeen mas?uuliyiin heer xukumaadeed iyo heer gobol iskugu jira oo dawladda Puntland ah iyo sidoo kale saraakiil ka socotay bangiga cunnadaasi qaybinayey oo shalay magaalada Galkacyo soo gaaray.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac “Tigeey” oo ugu horayntii ka hadlay goobta cuno qaybinta loogu sameeyay boqolaalka qoys ee barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa uu mahad celin gaar ah uu u jeediyay Bankiga Hormarinta Islaamka ee deeqdan soo gaarsiiyay.
Gudoomiye Tigey waxaa uu sheegay magaalada Gaalkacyo inay isku xirto gobolada kale duwan ee dalka Soomaaliya ayna tahay goobta ugu balaaran oo ay soo gaaraan qoysaska kasoo barakacaya magaalada Muqdisho iyo Ismaamulka soomaalida ee Itoobiya.
Cawad Maxamed oo ah madaxa gargaarada ee Bankiga Islaamka ayaa isaguna goobta ka sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay deeqda inay soo gaarsiiyaan Soomaaliya,waxaana uu sheegay Bankiga Islaamka inuu mashaariic badan uu ka fulin doono dalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah dadkii deeqda la gaarsiiyay maanta ayaa sheegay inay codsanayaan in la kordhiyo taageerada Bankiga Islaamka uu siiyo dadka dhibaataysan ee wali aan fursad u helin inay helaan deeqdan.
Deeqda Bankiga Islaamka uu maanta ka qaybiyay magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ay ka koobantahay gargaar cuno iyo daawooyin isugu jirta,waxaana la filayaa bankiga inuu sii laba jibaaro mashaariicda uu ka fulin doono magaalada Gaalkacyo sida ay sheegeen saraakiisha Bankiga Islaamka ee kusugan magaalada Gaalkacyo.